General Dhuumaal “Meelaha wax ka dhacayaan maaha meelo aan joogno” | Dhacdo
Home Wararka Maanta General Dhuumaal “Meelaha wax ka dhacayaan maaha meelo aan joogno”
General Dhuumaal “Meelaha wax ka dhacayaan maaha meelo aan joogno”
Maamulka Jubbaland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay duqaymaha is xigxigay ee Ciidanka Cirka Kenya ka gaysteen qaybo ka mida Gobolka Gedo, inkastoo sida ay sheegeen aanay garanayn cidda dhabta ahi ee ka dambeyso duqaymahaasi.
Duqaymahan oo ka dhacay deegaano ku dhow dhow xuduudda labada dal iyo kuwa kale oo ka baxsanba ayaa waxaa ku dhintay dad rayid ah, kuwo kalena way ku dhaawacmeen, halka lagu burburiyay xarumo ay laheyd Shirkadda Isgaarsiinta ee Hormuud Telecom.
Wasiirka Amniga Jubbaland, General Yuusuf Xuseen Cismaan (Dhuumaal) ayaa sheegay inaanay xog badan ka hayn goobaha ay duqaymaha ka dhaceen, marka laga soo taggo inay xogta ku hayaan waxyeelo dadka rayidka ah ka soo gaartay duqayntii ka dhacday deegaanka Ceelcadde iyo burbur soo gaaray anteenooyin Hormuud leedahay oo ku yaala baadiyaha Degmada Ceelwaaq.
“Meelaha wax ka dhacayaan maaha meelo ay Dowlad Goboleedka Jubbaland gacanta ku hayso ee waa meelo ay Shabaabku gacanta ku hayaan. Marka dad aan sidaasi u hadli karin inaad iska wareysato maahee xog fara-badan kama heli kartit.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka ayaa yiri “Waxaan si toos ah u leenahay barnaamijkaasi waanu ka xunahay ka Dowlad Goboleed ahaan, dadka Soomaaliyeed ee ku dhintayna waan kaga tacsiyeynaynaa, dadka Soomaaliyeed ee hantidooda la burburiyayna waan ka xunahay.”
Wasiirka ayaa tilmaamay inaanu macluumaad ka hayn cidda rasmiga ah ee duqaymahaasi gaysatay, waana xilli Dowladda Somaliya ay masuuliyadda duqayntaasi dusha u saarisay Militariga Kenya.
“Anagu wax macluumaad ah arrintaa kama hayno, diyaaradaa jiro oo dalka duqaymo oo Shabaabka beegsado, kuma dhihi karo waa dowladaas iyo qoladaas.” Ayuu yiri Wasiir Dhuumaal.
Waxa kaloo uu sheegay inaanay Militariga Kenya xogaha la soo wadaagin Maamulka Jubbaland, kolka ay duqaymaha ka gaysanayaan deegaanada Jubbaland.
Wasiir Dhuumaal ayaa ku baaqaya in Dowladda Federaalka ay baaritaan ku sameyso arrintan, bayaana ay ka soo saarto.
Previous articleCiidanka Xoogga Dalka oo hawlgal gaar ah ka fuliyay Shabellaha Hoose
Next articleQarax khasaaro gaystay oo ka dhacay Xeebta Jaziira (SAWIRRO)